ရန်ကင်းရှိ ၊ 1280 sqft ကျယ်ဝန်းသည့် Skysuites အဆင်မြင့်ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။ - ရောင်းရန် - ရန်ကင်း (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 4,500 သိန်း (ကျပ်) - S-7751503 | iMyanmarHouse.com
Q Home Construction Co.,Ltd ၏ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရန်ကင်းရှိ ၊ 1280 sqft ကျယ်ဝန်းသည့် Skysuites အဆင်မြင့်ကွန်ဒိုအခန်း ရောင်းမည်။
Q Home Construction Co.,Ltd ပိတ်ရန်
14 Feb 2020 3:14 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်
2687 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး |	ကြော်ငြာနံပါတ် S-7751503
- ရန်ကင်းမြို့နယ် ၊ ရန်ရှင်းလမ်းမ ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
- ၁၀၀% ဆောက်လုပ်ပြီး၍ အသင့်နေနိုင်သည်။
- အိပ်ခန်း (၂) ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ မီးဖိုခန်း၊ ဧည့်ခန်း စသည်တို့ပါဝင်ပြီး ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။
- Myanmar Plaza ၊ Melia Hotel ၊ Sedona Hotel ၊ Inya Lak တို့အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
- ရန်ရှင်းလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး သွားလာရလွယ်ကူအဆင်ပြေပါသည်။
- ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ နှစ်ရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
*** ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ ***
*** အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပြီး Skysuites Showroom တွင် လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူနိုင်သည်။***
မြန်မာပြည်၏ အကောင်းဆုံး Skysuites Condominium နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ
အဆင့်မြင့်မြင့်၊ အရည်အသွေးကောင်းကောင်းကို ရွေးချယ်လိုသူတွေအတွက် Skysuites ကွန်ဒို ကို ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အချက်အခြာနေရာဖြစ်တဲ့ အမှတ် (၂၃) ၊ ရန်ရှင်းလမ်း ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်ထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ...
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7751503 အတွက် Q Home Construction Co.,Ltd သို့ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အိမ်တန်ဖိုး ကျပ် (450,000,000) ၏ (70)% ဖြစ်သော ကျပ် (315,000,000) ကို အတိုးနှုန်း (13) ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် (5) နှစ် ချေးယူပါက နမူနာ တွက်ချက်မှုပုံစံ
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ :
(Your Loan Payment)
လစဉ် ငွေပေးချေမှု 7,167,218
ချေးငွေ ပမာဏ 315,000,000
စုစုပေါင်း ပေးချေရမည့်ငွေ 430,033,080
ချေးယူမည့် နှစ်ပမာဏ5years
(1800sqft)အကယျြ၊ ရနျကငျး၊ မငျးရဲကြျောစှာကှနျဒို၊ ပွငျဆငျထားပွီး ကှနျဒိုရောငျးရနျရှိ
Condonimium For sale (Yankin tsp) Located in Shwethitsar street (Cs-00863)
ရွှေသစ္စာကွန်ဒို အမြန်ရောင်းမည် *** သစ္စာလမ်းမအနီး ၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် (1600 Sqft)2Fl,2MBR, 1 BR, Lift, AC Carparking...
2875sqftThe Central( Shophouse)ရောငျးမညျ
Block3Room no. ( 31-03). Golden city Condominium Yankin Township Size: 1650 Sq ft, 31st Floor 1 Master Bedroom,2single Bedrooms 1 Maid Room, Fully Furnished Car Park, 24-hr Generator &amp; Security, Gym, Swimming pool, Playground,....
ရနျကငျးမွို့နယျ၊ မိုးကောငျးလမျး၊ ဘောကျထျောပွညျသာယာ စံကားဝါအိမျရာက အခနျးအငှားလေးပါ
ကန်ွဒို ငှားရန်ရှိပါသည် ကျောက်ကုန်းလမ်းမပေါ် Sky View Condo
ရန်ကင်းမြို့နယ် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများအားလုံး ကြည့်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ